အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးမြတ်သမိုင်းမခေတ်ဒိုင်နိုဆောရှာတွေ့ - စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွားသွား
ဒါဟာအလွန်လူကြိုက်များနှင့်ဂန္ခွေးသို့မဟုတ်လုံးဝပြည်တွင်းကြောင်ထွက်ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူဒါဟာပုံရသည်။ အခုတော့ဂျာမန်အိမ်ထောင်စုဆွဲထုတ်, ပိုပိုပြီးတွားသွားနှင့်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေယခုတစ်လိပ်တစ်တောက်တဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်တာရန်တူလာကောင်ချင်တယ်။
အဘယ်အရာကိုသာအပန်းဖြေကြှနျုပျတို့ခေါငျးကိုလှုပ်အမှန်တကယ်အများအပြားတစ်ခု option ကိုနှင့်ရိုးရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့, သူ့တိုက်ခန်းမှာအလွန်အထူးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့, ပြီးနောက်, ရှိနေပါသည်။ သို့သော်တွားသွားသတ္တဝါကလေးများနှင့်အတူသို့မဟုတ်အားလုံးကိုမှာအိမ်ထောင်စုများအတွက်တကယ်သင့်လျော်ပါသလဲ
သူတို့ရှည်လျားမေ့လျော့ကြိမ်ကိုသတိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ပေမယ်လိပ်နှင့်အိမျမွှောအတော်ကြာမျိုးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကို fascinate နှင့်ဖြစ်ကောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူတို့က, သဘောသဘာဝအတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကိုသိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှအတော်လေးဆန့်ကျင်ပြုမူခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်လည်းအထင်ကြီးစရာရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, တွားသွားအံ့သြဖွယ်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်သင့်လျော်? နှင့်ကလေးများနည်း
ပထမဦးစွာတစ်တွားသွားသတ္တဝါအတော်လေးမလှုပ်မရှားနှင့်သူ၏သဘာဝကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည့်တော်တော်ငြီးငွေ့စရာပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ကပျော်ရွှင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမကသောတွားသွားသတ္တဝါများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မှအပြီးအပိုင်မမွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်။ စားရန်တစ်ခုခုရှိသည့်အခါတွားသွားသာအမှန်တကယ်ပြောင်းရွေ့။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းတစ်လအတွက်ဒါလုံးဝနီးပါးကိုမမှာအားလုံး။
တချို့ကပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်မျိုးစိတ်ပင်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ပါဘူးသာလျှင်တစ်နေ့လျှင်ဦးတည်းမီတာရွှေ့နှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ကလေးများအဆုံး Chilling တောက်တဲ့မှာအစာရှောင်ခြင်းအလုံအလောက်မြင်ကြပြီနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
တစ်တွားသွားသတ္တဝါအားဖြင့်သင်တို့ကို, ပုခက်လွှဲခွေးလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ပတ်လည်ယူမသွားနိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်တွားသွားလူတို့အားဆွဲဆောင်ခံစားရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကလေ့လာသင်ယူဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်, ဒီလှည့်ကွက်သင်ပေးဖို့လိုအပ်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်သုံးဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
Coloring ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင် - အရောင်စာမျက်နှာလိပ်
ဒါ့အပြင်တစ်ဦးတွားသွားသတ္တဝါရငျးနှီးမှုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှထားပါတယ်သို့မဟုတ်သေချာပေါက်သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ caressed မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အာရုံကိုမရှာပါဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်: အ terrarium ထဲက Get ကြောင့်အလေးပေးမည်ဖြစ်ပြီးသင်အမှန်တကယ်သူ့ကိုဘာမျှမလုပ်ပေးကြောင်းလေ့လာသင်ယူဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
တွားသွားစျေးကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မဟုတ်မှသာဝယ်ယူအဆင့်၌တည်၏။ ဒါ့အပြင်မဆိုအပူမီးခွက်၏ဖြစ်ပွားနေသောလက်ရှိကုန်ကျစရိတ်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကောင်းသော terrariums လည်းရာပေါင်းများစွာယူရို, အဆက်စပ်ပစ္စည်းကုန်ကျခြင်းနှင့်အစားအစာအတော်လေး 50 ယူရိုနှင့်အတူတစ်လလျှင်အဆိုပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်တွားသွားအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်မပြုနိုင်သာအဘယ်သူမျှမတွားသွားသတ္တဝါမဝယ်သင့်သောစိတ်ဝင်စားဖို့အဆင့်ထဲမှာတွေ့လျှင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တွားသွားသားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီမဆိုကြင်နာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သေးငယ်တဲ့ဟူဂိုဥယျာဉ်ထဲသို့ဧည့်ခန်းထဲကနေသယ်ဆောင်လျှင်လိပ်တိုင်ကြားမည်မဟုတ်ပေမယ့်, စိတ်အားထက်သန်လည်းမကျပါလိမ့်မယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် Pony | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသောရှိပါသလဲ
အကြှနျုပျ၏ရေချိုးကန်နဲ့ကျွန်မ - ရုံပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုထက် ပို.
ကလေးများအဘို့အက Short Story - အဖြစ်တစ်ဦးကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ...
တစ်ဦး aphrodisiac အဖြစ်အရက် - ခေါ်ဆောင်သွား
ယူအက်စ်အေခရီးသွား - ခရီးသွားဦးတည်ရာအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
toxoplasmosis | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကြောင်ကနျြးမာရေး